Apple Watch Taxanaha 4 oo leh aaladda koronto-dhaliyaha | Waxaan ka socdaa mac
Electrocardiogram ee Apple Watch Taxanaha 4 haa, laakiin Spain wali ma ahan
Haddii aan horeyba ugu faraxsanahay imaatinka Apple Watch Series 4 ee Spain oo leh 4G ama LTE shaqeynaya, waan faraxsanahay markii aan awoodnay inaan xaqiijino taas Apple Watch wuxuu sii wadaa inuu udhaqaaqo habka saxda ah, ee xakameynta caafimaadkeena.
Apple waxay sii wadaa inay qaado tillaabooyin yar yar illaa inta ay ka shaqeyso Apple Watch welwelkeeda waana tan markii cusbooneysiinta nidaamkeeda watchOS ay dhacdo, xog dheeri ah waxaan ka baranaynaa horumarada ay Apple ku dartay marka la eego ogaanshaha dhaqdhaqaaqa isboorti badan ama ka mid noqoshada koronto si ay u awoodaan inay qabtaan koronto-dhaqameedyada.
Haddii aan eegno qeexitaannada in Apple waxay tilmaamaysaa shaqadan cusub, waxaan haynaa in shaqada koronto-qabatinku heshay Shahaadada De Novo ee FDA, taas oo aan ahayn in si kale loo yiraahdo qalabkani waxyeello uma geysan doono adeegsadaha adeegsada. Illaa iyo hadda wax waliba waxay u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan waana xitaa dhabarka dambe ee Apple Watch hadda waxaa laga sameeyay maaddada dhoobada gaar ah.
Astaantan cusub ee EKG waxay ku shaqaysaa adoo farta saaraya taajkaaga cusub ee dijitaalka ah adoo xidhan saacadda. In ka yar hal daqiiqo ayaad awoodi doontaa inaad ogaato heerka garaaca wadnahaaga isla markaasna waxaad ku ogaan kartaa inay kugu filan tahay.
Si kastaba ha noqotee, wax walbaa qurux ma noqon karaan waana taas, ugu yaraan Spain shaqadan cusub lama heli doono illaa dhammaadka sannadkan ama illaa iyo inta laga gaarayo 2019, iyadoo ku xiran heshiisyada ay tahay in lala galo Spain. Sidaas darteed haddii aad ka fekereyso inaad iibsato Apple Watch Series 4 oo keliya EKG, Maskaxda ku hay inaadan wali awoodin inaad isticmaasho.
Waa inaan dhahno in kastoo aysan weli ka helin Spain adeegsiga, micnaheedu maahan inaysan si buuxda u shaqeyneyn. Ma jiraan noocyo kala duwan oo leh koronto la'aan ama aan lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Electrocardiogram ee Apple Watch Taxanaha 4 haa, laakiin Spain wali ma ahan
Taxanaha Apple Watch 3 wuxuu kaloo ku darayaa ikhtiyaarka taleefanka gacanta